Mareykanka oo saxiixay xaaladda degdega burcadbadeeda iyo Al-shabaab ee Soomaaliya – Radio Daljir
Mareykanka oo saxiixay xaaladda degdega burcadbadeeda iyo Al-shabaab ee Soomaaliya
Abriil 5, 2018 9:32 b 0
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharciga xaaladda degdega ee Mareykanka ee ka dhanka ah burcadbadeeda iyo kooxda Al-shabaab ee dalka Soomaaliya.
Marykanka ayaa xaalad degdeg ah kusoo rogay kooxaha Burcadbadeeda iyo Al-shabaab sanadkii 2010ki, balse waxaa iminka lagu kordhiyay hal sano, halkii markii hore ay kaga ekayd bisha May.
Go’aankan oo soo baxay shalay oo Arbaco ah ayaa loo sababeeyey kadib markii ay kordheen khataraha ururka Al-shabaab iyo burcadbadeeda.
Burcadbadeeda iyo argagaxisada oo caqabad ku haya Soomaaliya ayaa dad badani ay rumaysanyihiin inay yihiin kuwa ka yimid dowladaha caalamka ayna yihiin kuwa la xiriira dano dhaqaalle iyo khayraadka dalka oo lagurto.
Golaha Amarmaanka ee QM oo ka hadlay weerarkii Al-shabaab ee Buulo-mareer